ISierra Leone NeGuinea: ‘Bakhokelele Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 3) | Incwadi Yonyaka Ka-2014
Ukumelana Nombutho WePoro
Uhlaselo lokuqala lwenzeka kwilali ekufuphi neKoindu, kwiqela lamadoda elalifunda iBhayibhile nelalisiya rhoqo kwiintlanganiso. Njengoninzi lwamadoda angamaKisi, la madoda ayengawombutho ofihlakeleyo oyiPoro, onxibelelana needemon. UJames Mensah umthunywa wevangeli oqeqeshwe eGiliyadi nowakha wakhonza eSierra Leone, uthi: “Xa izifundo zeBhayibhile zingazange zivume ukwenza amasiko, inkokeli yePoro yaba lugcwabevu ngumsindo. Le nkokeli kunye nabalandeli bayo, yawabetha la madoda, yeba izinto zawo, yatshisa amakhaya awo, yawabophelela ngamatsheyina yaza yawashiya ehlathini engenakutya. Inkosi yale lali nayo yantyontyela amalungu ombutho wePoro ukuba avukele. Phezu kwayo nje le mpatho imbi, abafundi beBhayibhile bahlala beqinile.”
Xa abazalwana bawusa emapoliseni lo mcimbi, inkokeli yePoro, abalandeli bayo kunye nenkosi babanjwa. Eli tyala laxoxwa baza balulekwa kanobom, inkokeli yalo mbutho yakhutshwa esihlalweni kangangexesha eliphantse libe ngunyaka. Imiphumo yeli tyala yakhawuleza yaziwa, loo nto yabangela ukuba abantu abangakumbi babe nesibindi sokuqalisa ukuya kwiintlanganiso. Kamva inkosi yatshintsha yaza yaqalisa ukuba nomdla enyanisweni. Xa kwabakho indibano yesiphaluka kummandla eyayihlala kuwo, yavula umzi wayo ukuba kuhlale iindwendwe ezityeleleyo yaza yanikela nangenkomo.
Ezinye iinkokeli zePoro zahlasela ngolunye uhlobo, ngobuchule ‘ziyila inkathazo zisebenzisa umthetho.’ (INdu. 94:20) Amalungu epolitiki akumbutho wePoro afaka isicelo ePalamente sokuba uvalwe umsebenzi wamaNgqina kaYehova. UCharles Chappell uthi: “Inkosi yasithethelela, isithi ineminyaka emibini ifundelwa iBhayibhile. Yathi inkonzo yethu ayithathi cala kwiipolitiki kwaye ifundisa amalungu ayo ukuba aziphathe kakuhle. Yade yathi nayo ifuna ukuba liNgqina ngenye imini. Xa elinye ilungu lePalamente elalifundelwa layixhasayo inkosi, sawa phantsi eso sicelo.”
Abo bayishiyayo le mibutho ifihlakeleyo bagculelwa kanobom ziintsapho zabo. UJonathan Sellu, umfana waseKoindu, wayenookhokho ababeziinkokeli zonqulo lweminyanya lwaseNtshona Afrika, kangangezizukulwana ezine. Kwaye wayefundiswa ukuze azeke mzekweni. Xa waqalisa ukufunda iBhayibhile wawayeka amasiko. Intsapho yakowabo yamgculela kanobom, yamkhupha esikolweni, ibe yayingamniki kutya xa eye ezintlanganisweni zamaKristu. Intsapho yakhe yayisithi: “Uza kutyiswa nguloo Thixo wakho!” Sekunjalo, uJonathan wahlala eqinile. Zange alambe, ibe wafundiswa ukufunda nokubhala. Kamva uJonathan waba nguvulindlela othe ngxi kwaye wavuya kakhulu xa umama wakhe wamkela inyaniso.
Ulwando Kwezinye Iindawo Zeli Lizwe
Ngo-1960 kwakukho amabandla kunye namaqela akwanti amaNgqina kaYehova eBo, eFreetown, eKissy, eKoindu, eLunsar, eMagburaka, eMakeni, eMoyamba, ePort Loko, eWaterloo, naseKabala. Ngaloo nyaka inani labavakalisi lantinga lisuka kwi-182 laya kutsho kwi-282. Kwafika oovulindlela abakhethekileyo abaninzi abasuka eGhana naseNigeria beze komeleza amabandla akhulayo.
Uninzi lwaba batsha babekumaqela amabini: AmaKrio awayehlala eFreetown nakwiindawo eziyingqongileyo, namaKisi awayehlala kwiPhondo eliseMpuma. Njengoko iindaba ezilungileyo zazisasazeka, kwabakho nezinye iintlanga ezibonisa umdla. Ziquka amaKuranko, amaLimba, amaTemne akumntla namaMende akumzantsi.
Ngo-1961 iBandla laseFreetown East lanikezela iHolo yalo yoBukumkani. Laza lona iBandla laseKoindu, lanikezela iHolo yoBukumkani eyakhiwe ngezitena zodaka, enezitulo eziyi-300 eyayiphinde isetyenziswe njengeHolo yeNdibano. Kungekudala emva koko, abadala abayi-40 baya kwisikolo sokuqala Sobulungiseleli SoBukumkani, eSierra Leone. Kwakulo nyaka unolwando olungaka, abazalwana baba nephulo elihle lokuhambisa iNguqulelo Yehlabathi Elitsha YeZibhalo Ezingcwele kubahlali balapho.
Isikolo Sobulungiseleli SoBukumkani eSierra Leone, ngo-1961. UWilliam Nushy (ngasemva, esiphakathini), UCharles Chappell (esiphakathini, owesibini ukusuka ekunene), noReva Chappell (ngaphambili, owesithathu ukusuka ekunene)
Licacile elokuba uYehova wayebasikelela abantu bakhe. NgoJulayi 28, 1962, umbutho osetyenziswa ngamaNgqina kaYehova kumazwe amaninzi, i-International Bible Students Association, wabhaliswa ngokusemthethweni eSierra Leone.
Intsimi YaseGuinea Iyaqal’ Ukushunyayelwa
Ngoku makhe sithethe ngelizwe eliselumelwaleni, iGuinea (eyayisaziwa ngokuba yiFrench Guinea). Ngaphambi kuka-1958, abazalwana abambalwa bashumayela kwabanye abantu ngoxa begqitha kweli lizwe, kodwa amagunya aseFransi akweli lizwe ayengayifuni le nto. Kodwa ngo-1958 kwavuleka ikroba—iGuinea yayeka ukulawulwa yiFransi yaza yalilizwe elizimeleyo.
Ngasekupheleni kuka-1958, uManuel Diogo, umzalwana owayethetha isiFrench waseDahomey (ngoku eyaziwa ngokuba yiBenin) owayekwiminyaka yama-30 ubudala, waqalisa ukuphangela kumgodi webauxite (ilitye lexabiso) waseFria, idolophu eziikhilomitha eziyi-80 ukusuka kumntla wekomkhulu leli lizwe iConakry. Esitsha ziintambo, kwaye efuna ukushumayela kule ntsimi intsha, uManuel wabhalela isebe laseFransi ecela uncwadi lweBhayibhile noncedo loovulindlela abakhethekileyo. Ileta yakhe wayivala ngala mazwi: “Ndithandazela ukuba uYehova awusikelele lo msebenzi ngoba baninzi abantu abanomdla apha.”
Isebe laseFransi labhalela uManuel ileta emkhuthazayo, laza lamcela ukuba ahlale eGuinea kangangoko anako. Lathumela novulindlela okhethekileyo owayeza kumqeqesha kumsebenzi wokushumayela. UManuel wakhuthazeka ibe washumayela ngenkuthalo eFria de wasweleka ngo-1968.
Ngo-1960, uWilfred Gooch, umveleli otyelela amasebe waya eConakry waza wafika kukho abazalwana ababini abantsundu ababeshumayela khona. UMzalwan’ uGooch wacebisa ukuba iGuinea inyanyekelwe yiofisi yesebe yaseSierra Leone kunaleyo yaseFransi. Olu tshintsho lwenzeka ngoMatshi 1, 1961. Kwadlula inyanga yanye, kwasekwa ibandla lokuqala eGuinea kwidolophu yaseConakry.
Inyaniso Ifika Nakumahlathi Ashinyeneyo
Iindaba ezilungileyo zafikelela nakumzantsi weGuinea. UFalla Gbondo, indoda yomKisi eyayihlala eLiberia, yabuyela kwilali yakowayo eFodédou, ekwiikhilomitha eziyi-13 ukusuka kwintshona yeGuékédou. Wayephethe incwadi ethi, Ukusuka kwiParadesi Ilahlekile kuye kwiParadesi Ibe Yazuzeka. UFalla wayengakwazi ukufunda, kodwa wayekwazi ukuchaza imifanekiso kubantu belali yakhe. Uthi: “Le ncwadi yavusa iingxoxo ezininzi. Abantu babesithi yincwadi ka-Adam noEva.”
UFalla wabuyela eLiberia. Wabhaptizwa waza ekuhambeni kwexesha wanguvulindlela okhethekileyo. Kabini ngenyanga, wayebuyela kwilali yakowabo ukuze afundele abantu abayi-30. Kungekudala, wancediswa nguBorbor Seysey, omnye umKisi osuka eLiberia nowayenguvulindlela okhethekileyo. Basebenza bobabini baseka elinye iqela eGuékédou. Omabini la maqela aba ngamabandla.
Njengoko ayesanda amaKisi amkela inyaniso, iinkosi zayiqaphela ihambo yawo entle. La maNgqina ayekhuthele, enyanisekile kwaye ekhuthaza uxolo kwiilali akuzo. Xa abazalwana bacela imvume yokwakha iHolo yoBukumkani eFodédou, iinkosi zakhona zavuma lula kwaye zabanika iihektare ezintathu zomhlaba. Ngoko iHolo yoBukumkani yokuqala yaseGuinea, yagqitywa ekuqaleni kuka-1964.
EConakry kwakukho iingxaki ezaziqalis’ ukuvela. Ngenxa yemeko yeepolitiki eyayingentle, urhulumente waqalis’ ukurhanela bonk’ abantu basemzini. Abathunywa bevangeli abane abaphumelela eGiliyadi zange bavunyelwe ukuba babe neempepha ezibavumela bahlale isigxina kweli, ngoko bagxothwa. Abazalwana ababini abasuka eGhana batyatyekwa ngezityholo zobuxoki baza bavalelwa iinyanga zambini entolongweni.
Emva kokukhululwa kwabo, omnye waba bazalwana uEmmanuel Awusu-Ansah, wakhawuleza wavalelwa kwakhona kwintolongo eyayikwimeko engaginyisi mathe. Ekwisisele sentolongo esimdaka, wabhala la mazwi: “Ubuhlobo bam noYehova busebuhle, kodwa ndiphethwe ngumkhuhlane ongapheliyo. Sekunjalo ndisakwazi ukushumayela. Kule nyanga idluleyo ndishumayele iiyure eziyi-67, ibe izifundo zam ezibini ziqale ukundincedisa ekushumayeleni.” Esinye kwezi zifundo zakhe sayamkela inyaniso. Emva kweenyanga ezintlanu, uMzalwan’ uAwusu-Ansah wakhululwa entolongweni wasiwa eSierra Leone. Kwashiyeka umvakalisi omnye eConakry.
Ngo-1969, xa imeko yezopolitiko yaphucukayo, kwagaleleka oovulindlela abakhethekileyo eConakry. Ngemvume abayifumana kwabasemagunyeni, bakha iHolo yoBukumkani baza baxhoma nombhalo wayo. Kungekudala, kwakukho abantu abayi-30 ababenomdla ababesiya rhoqo kwiintlanganiso.
Ngenxa yokoyika ukubanjwa, ekuqaleni abazalwana babehlala bevule amehlo ngoxa beshumayela. Njengoko babesiba nesibindi, bashumayela nangakumbi. Ebudeni bonyaka ka-1973, elo bandla lincinane lahambisa amaphecana ayi-6 000. Kamva abavakalisi baqalisa ukuhambisa iimagazini kwiiofisi nakwiindawo zamashishini. Urhulumente kunye nabahlali baqalisa ukuwaqhela amaNgqina ibe babewuxabisa umsebenzi wawo wokushumayela. NgoDisemba 15, 1993, iinzame zala maKristu zaphumela ekubhalisweni ngokusemthethweni kombutho i-Christian Association of Jehovah’s Witnesses of Guinea.
Babesithi “Uza kutyiswa nguloo Thixo wakho!”
ISierra Leone NeGuinea: 1948-1990 ‘Bakhokelele Abaninzi Ebulungiseni’—Dan.12:3. (Inxalenye 3)